IMPACT ichaisa mari inosvika mamirioni e6,4 muEuropean nhare dzeInternet kutanga nekwavo kechitatu kuvhura | ECommerce nhau
La IMPACT accelerator ichapa mari inosvika mamirioni 6,4 euros mu nharembozha internet kutanga MaEuropean nechetatu chavo kuvhura kufona, iyo yakavhurwa nechinangwa chekusarudza uye nekuchinjisa makumi maviri nemaviri ekutanga anovhiringidza kutanga mumunda weInternet nhare.
Maitiro ekusarudza achaenderera kusvika Gumiguru 15. Iwo ekupedzisira ekutanga anotambira 2,2 mamirioni euros mune isingadzoreke mari, iine avhareji ye100.000 euros purojekiti, mazana maviri emaawa ekudzidzisa, zvikamu zvekudzidzisa chekupa mazano kwemwedzi mitanhatu uye kuwana kune vanozvimirira vega. Pakati pemwedzi mitanhatu iyoyo, vakasarudzwa vanozove nerutsigiro rwe IMPACT network yevanachipangamazano vekunze, nyanzvi mu nhanho yekumhanyisa maitiro izvo zvinopa vanamuzvinabhizimusi mukana wakasarudzika wekukura uye internationalalization yemapurojekiti ako.
Nacho anobva kuPinedo, CEO weISDI uye komiti inotungamira IMPACT inotsanangura kuti: “Chinangwa cheIMPACT chave chekugadzira chinamato chekusiyanisa zvichibva mukuita kwepamusoro uye pachena. Matangi ekutanga akasarudzwa akagadzira zvikwata zvavo, akagadzira mabasa matsva, akawedzera huwandu hwevatengi ne300% uye akakwezva ekunze kutenderera kwemari. Tine chokwadi chekuti nemapurojekiti atinosarudza mune ino yechitatu yakavhurika kufona, IMPACT ichazvimisikidza seimwe yeanonyanya kukoshesesa epasirose muEurope uye ichave yakakonzera kukosha kukuru kune yeEuropean bhizinesi ecosystem.
1 Zvinodiwa kuti uwane yechitatu IMPACT yakavhurwa kufona
2 IMPACT, yakasarudzika yekumhanyisa modhi
Zvinodiwa kuti uwane yechitatu IMPACT yakavhurwa kufona
ari zvinodiwa kukodzera kusarudzwa zvinotevera:
Zvese zvirongwa zvinokodzera chirongwa chekumhanyisa zvinofanirwa shanda munzvimbo yemafoni uye inoshandisa kana kuzvipira ku shandisa FIWARE tekinoroji, inovandudza uye yakavhurika zvivakwa inofambiswa neEuropean Commission uye zvichibva pagore rekugadzira uye kushambadzira kweInternet kunyorera uye masevhisi.
Vanogona kuiswa mapurojekiti muchikamu chekutanga (80% yeavo vakasarudzwa mumafoni maviri apfuura akavhurwa) chero vachiverenga ine prototype inoshanda iripo, kukosha kusingasviki mamirioni euros uye ne, zvirinani, timu yevanhu vaviri yakatsaurirwa zvizere kukambani. Basa reIMPACT mune ino kesi rinotarisa kuvhurwa kwayo uye kusimbiswa mumusika mune isingasviki mwedzi mitanhatu.
Ivo vanogona zvakare kuiswa uyemakambani akatogadzirwa, iine huvepo mumusika, sekureba sezvavanazvo ane makore asingasviki manomwe ehupenyu, mari iri pakati pemiriyoni imwe nemaviri emamiriyoni uye umo mavagadziri akabata angangoita 51% yekugovana. IMPACT chinangwa chavo chichava chakanangana nekudyidzana kwenyika dzepasi rose, kusimbisa kana shanduko mukutungamira kuita kukura kwekuratidzira.
Vokupedzisira veiyi sarudzo yekusarudza vanogashira a avhareji mari yemamiriyoni zana ezviuru epurojekiti, isingadzoreke Uye zvakare, ivo vanozowana iyo chekupa mazano zvachose kwemwedzi mitanhatu nenyanzvi dzinozivikanwa pasi rese mubhizimusi redhijitari, vanozopa vanamuzvinabhizimusi chiono chepasi rose nemukana wakasarudzika wekusimudzira nekudyidzana kwenyika dzese
IMPACT, yakasarudzika yekumhanyisa modhi
IMPACT inopa yakasarudzika yekumhanyisa modhi, iyo inogona kutsanangurwa seyepasirese, inotyisa, uye inosemesa. Imwe yemasimba makuru eiyo IMPACT modhi mukana wekukurumidza makambani kubva chero kupi pasi, neayo epasi rese network yehunyanzvi vanopa mazano mune nhare yedhijitari yekumhanyisa.
IMPACT yakagadzira akateedzana epamhepo ekumhanyisa maitiro akasarudzika mumusika anotendera iwo ekutanga kuwana masevhisi avo ari kure, kufambisa basa reboka revapi vemazano, iro rinounza pamwechete vanamuzvinabhizimusi uye nyanzvi kubva kumakambani makuru mudigital ecosystem uye epasirese matsva enzvimbo: MIT (Massachusetts Institute of Technology), Google, LinkedIn neAmazon, pakati pevamwe.
IMPACT ine yakasarudzika timu yevanopa mazano uye vanachipangamazano, iyo yakabatanidzwa nehunhu hwakadai saSteve Cadigan (aimbova LinkedIn Mutevedzeri weMutungamiri uye chipangamazano wekutanga weSilicon Valley), Yaniv J. Turgeman (MIT, Senseable City Lab), Mauro del Río (Buongiorno muvambi), Arnaldo Muñoz, (Airbnb CEO Spain uye Portugal), Toni Raurich (CEO Booking.com EMEA), Francois Derbaix (muvambi weTop Rural), Gustavo García Brusilovski (muvambi weTenga VIP), Carina Szpilka (mutevedzeri wemutungamiri weUNICEF uye aimbova CEO weING) naDidac Lee (nhengo webhodhi reFC Barcelona uye CEO weInspirit), pakati pevamwe nyanzvi dzakakodzera. Rondedzero yevanopa mazano iri kuramba ichikura uye inotarisirwa kuve neboka revapfuura makumi mashanu mahunyanzvi avo vanopa ruzivo rwavo, vanofambidzana neruzivo, vachizadzisa kukura nekusimudzira kwezvirongwa.
Zvichienzaniswa neavhareji evanokurumidza muEurope vanoisa mari pakati pe20.000 ne50.000 euros mukutsinhana pakati pe10% ne15% pinda mune yekugovana, IMPACT ine 6,4 mamirioni euros eEuropean mari yekuisa mari mukutanga uye zvipo zvavo, evhareji ye100.000 euros purojekiti, ichaitwa pasina chero kuchinjana kwemasheya.
Kune rimwe divi, inoratidza kuti iyo IMPACT modhi inopa misiyano yakakosha ichienzaniswa nemamwe mapurogiramu ekuchimbidza mune akasiyana mativi, ayo anotevera:
Modhi yemari: kupihwa kunosvika zviuru zana zvemamiriyoni hakubhadharwe; Hapana mumwe mubatsiri kana kuchinjana kwemasheya anodikanwa kubva kutanga.
Nhoroondo yekutangisa: IMPACT inotarisana nemapurojekiti eInternet eInternet, ane chiyero cheEuropean, zvese mumatangiro ekutanga uye ekukura.
Yakawanda-nhanho sarudzo yekuita: ine online chikuva, yakazvimirira pani yehunyanzvi uye akasiyana mafomula ekuongorora mapurojekiti.
Yakagadziriswa yekumhanyisa maitiro. Izvo hazvidiwe kuti vatangi vashandure kwavanogara.
Network yenzvimbo nenzvimbo: kuburikidza nezvibvumirano nemasangano akasiyana siyana uye ISDI nzvimbo muMadrid, Barcelona, ​​b-ventures muMilan kana MStartup nedzimwe nyika gumi nemana kubva muchikamu chechipiri chekudyara.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve sarudzo yechitatu kuvhura kufona kubva kuIMPACT kushanya www.chememes-ccceator.com
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » IMPACT ichaisa mari inosvika mamirioni e6,4 muEuropean nhare dzeInternet kutanga nekwavo kechitatu kuvhura